An-naasikh & Mansuukh | U adeeg Xadiith-ka Rasuulka
Waa maxay Xadiiska Naasikha iyo kan Mansuukha ah?
An-naasikh luuqad ahaan wuxuu leeyahay laba macne:
1) Al izalah(.baabi’in) marka la leeyahay oo kale qoraxdii waxay baabi’isay ama tirtirtay hooskii . 2) Macnaha kalena waa “Gudbin” sida marka la leeyahay kitaabkii ayaa kitaab kale laga koobiyeeyay yacni wixii macluumaadk ku jiray kitaabka hore waxaa loo gudbiyay ama lagu guuriyay kitaabkan kale..
Isdilaax ahaana naasikh waxaa laga wadaa in xukun horey u jiray lagu badalo ama lagu baabi’iyo xukun cusub oo ka danbeeyay.
Yacni xadiiskii la tirtiray ee mansuukha ahaa laguma dhaqmayo ee waxaa lagu dhaqmi xadiiskan wax tirtiray ee naasikha loo yaqaan.
Imaam Azuhari wuxuu yiri qofkaan kala aqoon xadiiska naasikha ah iyo midka mansuukha ah wuxuu isku qaldaa diinta . Qaar ka mida salafkiina waxay oran jireen ma fatwoon karo qof aan kala saari karin xadiiska la badalay (Mansuukh) iyo kan lagu badalay(Naasikh), waana muhiim inuu kala garto kalana fahmo Muftigu.
Hadaba in la kala barto xadiiska naasikha ah iyo kan mansuukha ah waa fani muhiimadiisa iyo weynaantiisaba leh. Muhiimadiisuna waxaa weeye si loo kala ogaado xadiisyada aan la daliishan karin , kuwaas oo uu ka danbeeyay xadiis kale oo badalay xukunka xadiiskii hore uu lahaa.
Sidee lagu ogaan in xadiiskan yahay naasikh oo uu tirtiray xadiis kale?
Waxaa lagu ogaadaa dariiqooyin badan, waxaana ka mida:
In si toosa Rasuulka salalahu calayhi wasalam looga maqlay. Tusaale: Xadiiska oranaya ( waxaan ahaa mid idinka reeba inaad qubuuraha booqataan, balse hadda soo booqda qubuuraha ,waayo wuxuu idin xasuusinayaa aakhiree) Imaam Muslim baa werinaya.
In lagu garto taariikh ahaan . Tusaale : Xadiiska uu werinayo Shadaad bin aws ee oranaya ( wuu afurayaa kan is tooba iyo kan toobayaba), xadiiskaan waa la nasakhay waxaana ka danbeeyay xadiiiska Ibnu Cabaas werinayo ee oranaya ( Nebiga salalahu calayhi wasallam wuu is toobay isagoo sooman). Hadaba xadiiska Shadaad wuxuu ahaa xiligii Mekkah la furanayay sanadkii 8aad Hijrada,kan ibnu Cabaasna wuxuu ahaa sanadkii 10’aad Hijrada ee ahaa sanadkii “Xajatul wadaac”, sidaa daraadeed waxaynu leenahay xadiiska Ibnu Cabaas ayaa la qaadanayaa xukunkiisa maadama uu isagu danbeeyay.
Waxaa kaloo lagu ogaan karaa in daliil ijmaaci ahi jirto. Tusaale: xadiiska oranaya (qofkii Khamra caba hala karbaasho haduu mar afaraad ku noqdana hala dilo). Waxay isku raaceen culimadu in xukunka dilka ee qofka khamrada caba uu yahay xukun la baabi’iyay, sidaasna uu ku noqonayo mid aan la soo daliishan karin.
Tusaale ka mida xadiisyada la nasakhay. Wuxuu reebay Rasuulku sallalahu calayhi wasalam guurka Mutcada ah sanadkii xajjatul wadaac isagoo horey u baneeyay dagaalkii awdaas sanadkii sideedaad Hijrada .
Faa’iidada Barashada naasikha iyo Mansuukha
Faa’iidada in la kala barto xadiiska la nasakahay iyo xadiiska wax nasakhay waxay tahay in la kala fahmo axkaamta la tirtiray iyo axkaamta lagu dhaqmayo ee taagan xili walba iyo sidoo kale waxa ka dhalan kara hadii xadiis xukumkiisii la badalay la soo daliishado laguna dhiso Mas’allo xaaraam iyo xalaal khusaysa marka laga hadlayo xaga fiqiga iyo axkaamka sharciga.
Dadka ugu cad cad fankan waxaa ugu horeeya Imaam Shaafici.
Imaam Axmed bin xanbal isagoo ka hadlaya wuxuu yiri ” Maanaan kala garan jirin mana aanan kala saari jirin xadiiska naasikha ah iyo kan mansuukha ah ilaa aan kala fadhiisano Shaafici”.
Kutubta ugu caansan ee laga qoray “الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار” waxaa qoray Abii bakar Maxamed Alxaazimi
الناسخ والمنسوخ waxaa qoray Imaam Axmed bin Xanbal
تجريد الأحاديث المنسوخة waxaa qoray Ibnu Jowzi
Ogaysiis: Waan ogalahay ruux welba oo maqaalada Bloggayga kujira sii faafiya ,laakiin Please adoo raali ah ku hoos qor in aad Blogga>Muhaditha.wordpress.com ,aad kasoo xigatay. Jazaakallahu kheyraa Like this:Like Loading...
from → An-naasikh & Mansuukh, Duruus Yaryar Cilmul Xadiith
← Sheekh Axmed Shaakir (Abuu Ashbaal)
Muxamed Ibnu Aslam Ad-duusi →